राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र मगर समाजको अनिबार्य सहभागिता ! – Rajyasatta.com
Reading Now राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र मगर समाजको अनिबार्य सहभागिता !
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र मगर समाजको अनिबार्य सहभागिता !
‘२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा “नेपाल मगर संघ”ले “मगरको गणना मगरको सहभागिता”को नारा साथ अघि बढ्नु पर्नेहुन्छ ‘।
मुलुकमा संघियताले प्रवेश गरिसके पछि हुन लागेको १२औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । आगामी चैत्र २०७७बाट प्रदेश तथा जिल्लामा र वैशाख २०७८बाट स्थानिय तहमा जनगणना कार्यालयहरू खोल्ने गरि तयारी भईरहेको छ । वैशाख २ देखि जेष्ठ १४ सम्म घर परिवारको सूचिकरण कार्य र जेष्ठ २५ देखि असार ८ सम्म मूल कार्यक्रम सम्पन्न गरिने भएको छ ।
जनगणना भनेको केवल मानिसहरूको गन्ती वा गणनामात्र होइन । प्रत्येक नागरिकको उमेर, लिङ्ग, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, वैवाहिक, पारिवारिक आदि स्थितिको सूचनाहरूको संकलन, संगठन, मुल्यांकन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन प्रकाशनको प्रक्रियालाई जनगणना भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । प्रत्येक दश–दश वर्षमा जनगणना लिने काम हुन्छ । मुलुकको जनसंख्या सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के–के परिवर्तनहरु भए भनेर जनगणना तथ्यांकहरुसँग तुलना गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रश्नहरुमा धेरै परिवर्तन हुँदैन । केही थप प्रश्नहरु नयाँ परिवेशमा समावेश हुन्छ ।
ख) जनगणनाको आवश्यकता
कुनैपनि मुलुक, स्थानीय निकाय, र समुदायलाई आफ्नो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विकासका नीति, कार्यनीति, रणनीति, योजना आदि तर्जुमा गर्नुपर्यो भने आवश्यक सत्य तथ्य तथ्याङ्क एवं सूचनाहरु आवश्यक पर्दछ । साथै राज्यले जनताको घर दैलोसम्म सेवा सुविधा र सहुलियत पु¥याउन पर्यो भने पनि तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ । यसरी जनगणनाको तथ्याङ्क राज्य तथा नागरिक दुवैलाई समानरुपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण एंव आवश्यक हुन्छ ।
ग) नेपालमा जनगणना
नेपालमा जनगणना लिने कार्यको औपचारिक सुरुवात सन् १९११ देखि भएको हो । हालसम्म ११ पटक जनगणनाको कार्य नेपालमा सम्पन्न भइसकेको छ । सन् १९११ देखि १९४१ सम्म जनगणना लिने कामको लागि छुट्टै निकाय वा विभाग थिएन । प्रत्येक जिल्ला प्रशासनले आँफ्नो जिल्लामा आफै जनगणना लिने कार्य गर्दथिए । फलस्वरुप अत्यन्त अपत्यारिलो र त्रुटिपूर्ण हुन्थ्यो ।
सन् १९८१ को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास गरियो । सन् २००१मा ७५ जिल्लामा जनगणना कार्यालयहरु स्थापना गरियो । “कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन्” भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय जनगणनाको काम सम्पन्न भएको थियो । जनगणनाको दोस्रो स्रोत पंजीकरण प्रणालीबाट पनि भरपर्दो तथ्यांकहरु संकलन गरिएको थियो । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सामाजिक संस्थाहरु बाट व्यवस्थापन, प्राविधिक एवं भौतिक सहयोगसमेत लिइएको थियो ।
सन् २०११ (विसं २०६८) को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा अझ व्यापक सुधार गरिएको थियो । अझ बढी बैज्ञानिक प्रविधिहरूको प्रयोगबाट भरपर्दो सत्य तथ्य तथ्याङ्क लिने प्रयास गरिएको थियो । तर पनि झन् त्रुटिपूर्ण तथ्यांक प्रतिबेदन प्रकाशनमा आएको पाइयो ।
घ) त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन
विसं २०६९ मंसिर ११ गते (सन् २०१२ नोभेम्बर २७–२८) तारिखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना विसं २०६८ लाई सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा त्रुटिपूर्ण तथ्यांकहरु निम्नअनुसार फेला परेको थियो ।
१) मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या तीन प्रतिशत तथा मगरहरूको जनसंख्या ७.१२ प्रतिशतले अपत्यारिलो ढंगले घटेको देखाइयो ।
२) विभिन्न जनजातिले आ–आफ्नो छुट्टै धर्म लेखायता पनि हिन्दूहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा बढी (८१.३ प्रतिशत) र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढ्नु पर्नेमा घटेको (९ प्रतिशत) देखाइयो ।
३) सरकारी जनसंख्या सूचीमा जनजातिहरूको संख्या १५५ वटा सूचीकरण गरिएको छ । तर राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले जम्मा १२५ वटा मात्र जनजाती रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । (२०६९ मंसिर ११ गते)
४) सरकारले सूचीकृत गरेको १२ जनजातिको नाम राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा छुटेको देखियो । (तीन गाउँले, वार गाउँले, लाकर्,े सियार, थुदाम, ताङवे, मुगाल, मर्फाली थकाली, सुरेल, फ्री छै रोतन र बनकरिया) (१४ मंसिर २०६९)
५) कुनै जनजातिमा मातृभाषा बोल्ने वक्ताको संख्या धेरै छ तर जातिको जनसंख्या थोरै छ । वान्तवा जातिको जनसंख्या ४६०४ छ भने भाषा बोलने जनसंख्या १,३२,४८३ देखाइएको थियो । (१४ मंसिर २०६९)
६) अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति थिए भने २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा घटेर ३५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाइएको थियो । १० वर्षभित्रमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या दुई प्रतिशतले घट्नु भनेको पत्यारिलो तथ्यांक लागेन । फलस्वरूप आदिवासी जनजाति विशेषज्ञहरुले “तथ्यांक होइन मिथ्याङ्क हो” भनेर २०६८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएका थिए । त्यसबेला केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जनगणनाको तथ्याङ्कलाई पुनरावलोकन गर्ने समेत वाचा गरेको थियो । तैपनि २०६८ सालको जनगणनामा लिइएका सबै तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरिएन ।
७) जनगणनाले व्यक्ति र समुदायको पहिचान दिन्छ । वर्तमान संविधानले नै सबैको पहिचानको संरक्षण प्रत्याभूति गरेको छ । सबैले आफ्नो समुदायको संख्या सही तथ्यांक थाहा पाउनु पर्दछ । अनि आफ्नो समुदायको अधिकार, सेवा सुविधाका लागि राज्यसँग राजनैतिक बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ । अतः “नेपाल मगर संघ”ले जनगणनामा भुमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
ङ) नेपाल मगर संघको भूमिका
यसपालिको राष्ट्रिय जनगणनामा सकेसम्म सही तथ्याङ्क लिने प्रयास गरिनेछ । केही प्रतिशत त्रुटि हुन्छ तर जनगणना लिने कार्यमा यसपाली सकेसम्म कम त्रुटिहरू होस् भन्ने प्रयास गरिनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय स्तर तथा घरदैलोमा राष्ट्रिय जनगणना प्रति जागरण एवं आम नागरीकमा अपनत्वको महशुस र सहभागिता हुने वातावरण मिलाइने छैन तब सम्म यो कार्यक्रम सफल हुनेछैन ।
अतः “नेपाल मगर संघ”ले मगरहरूको सत्य तथ्य तथ्याङ्क गणना गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्रममा निम्नलिखित कार्यक्रमहरु संघले अझै सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछः
च) “जनगणना २०७८ जागरूकता अभियान”
१) जुन–जुन जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुमा मगरहरूको बाक्लो जनसंख्या छ वा घनाबसोबास छ त्यहाँ–त्यहाँ २०७८ राष्ट्रिय जनगणना बारेमा जनतामा जागरण अभियान सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
छ) घुम्ती टोली
२) तीन–तीन वा पाँच–पाँच जना मगर स्वयंसेवकहरूको “जनगणना जागरण वा जागरुकता अभियान” घुम्ती टोली गठन गर्नु पर्दछ । सो टोलीले प्रत्येक गाउँ र वडाहरुमा भ्रमण गर्नुपर्दछ ।
३) घुम्ती टोलीले स्थानीय नागरिकहरूलाई (मगर समुदाय) जनगणनाको महत्व, जनगणना किन चाहिन्छ र गणनामा आफ्नो नाम छुट्यो भने के बेफाईदा हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।
४) आफ्नो जात, थर, भाषा, पुर्ख्यौली भाषा, धर्म आदि बारेमा “नेपाल मगर संघ”को नीति अनुसार लेख्ने वा बताउने बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।
ज) सहजीकरण वा समन्वयन समितिमा मगर सहभागिता
५) यसपाली सम्भवतः विभिन्न स्तरहरुमा “जनगणना सहजीकरण वा समन्वय समिति” गठन गरेर जनसहभागिता लिने प्रयास गरिने भएको छ । सो समितिको गठन वडा तहसम्म गरिने भएको छ । अतः “नेपाल मगर संघ”ले मगर बुद्धिजीवी, समाजसेवी र राजनीतिक अभियान्ता आदिलाई सो समितिहरुमा सदस्य बन्न वा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
झ) मगर गणक र सुपरिवेक्षण
६) यसपाली अनलाइनमार्फत ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षकले १५ दिनको अवधिमा ७० लाख परिवार तथा तीन करोड जनसंख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । म्यादी भर्ना गर्ने कार्य अनलाइन पद्धतिबाट हुनेछ । अतः “नेपाल मगर संघ”ले मगर युवाहरूलाई (एस.एल.सी. पास) गणक तथा सुपरभाइजरमा आवेदक दिन लगाउन प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
७) छनोटमा परेका मगर गणक र सुपरिवेक्षकहरुलाई जनगणना तथ्यांक संकलनमा “नेपाल मगर संघ”को जनगणना सम्बन्धी नीतिहरू बारे अवगत गर्नु गराउनु पर्छ ।
ञ) केन्द्रीयस्तरमा अवलोकन
८) तथ्यांक संकलन भएपछि केन्द्रित स्तरमा गरिने तथ्याङ्क प्रशोधनको समयमा “नेपाल मगर संघ”को विज्ञ टोलीले अध्ययन र लेखा जोखा गर्नु पर्दछ ।
बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई सफल पार्न नागरिकको सक्रिय सहभागिता, जागरूकता तथा चेतनाका साथै सरकारी यन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । अतः “नेपाल मगर संघ”को जनगणनामा सकरात्मक भूमिकाले मगरहरूको सत्य तथ्य तथ्याङ्क संकलन गर्न गराउन सकिन्छ । त्यसको लागि २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा “नेपाल मगर संघ”ले “मगरको गणना मगरको सहभागिता”को नारा साथ अघि बढ्नु पर्नेहुन्छ ।
लेखक : मास्टर मित्रसेन प्रष्ठिानका अध्यक्ष एबं नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिका सल्लाहाकार हुनुहुन्छ ।